Voankazo Bali. Seasons " Journey-Assist - Famerenana feno. Photo. Manimba sy mahasoa
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Voankazo Bali. fizaran-taona
Voankazo Bali. Fotoana sy vidiny
Ny lohahevitry ny voankazo any Bali dia tsy hoe matsiro ihany fa mahasalama ihany koa. 🙂 Ity misy topy maso ny voankazo any Bali, ny mahasoa azy ireo, rehefa masaka izy ireo, ohatrinona ny vidiny, ny fomba fisafidianana azy ireo ary ny fomba fihinanana.
Ny voankazo Bali miaraka amin'ny vidiny sy ny vanim-potoana
Vita ny Bali Fruit Guide! Sary, ny fomba hisafidianana, ny fomba fidiovana, ny fomba fitehirizana, ny fananana mahasoa, ny manimba ary ny fampahalalana ilaina hafa 🙂
Kepundung, Gooseberry Azia
manga (Ny anarana Thai dia Mamuang)
Ny Mango dia tompon-tany any India, izay iantsoana azy hoe "mpanjakan'ny voankazo". Milaza ny angano fa loharanom-pahendrena sy tanjaka ny manga. Any India, mandraka androany, rehefa manamboatra trano dia misy voankazo manga napetraka ao amin'ny fototra, mba hanjakan'ny fampiononana sy ny firindrana ao an-trano.
Ny vidin'ny mangoes miovaova isaky ny vanim-potoana ary manomboka amin'ny 30 ka hatramin'ny 70 baht isan-kilao. Mazava ho azy fa, any amin'ny toerana lavitra ny toerana fizahan-tany dia ahitanao azy ireo mora kokoa.
Vanim-potoanan'ny Mango any Thailandmanomboka amin'ny tapaky ny volana martsa ary mifarana amin'ny tapaky ny volana jona. Fa afaka mihaona amin'ireo manga eo amin'ny talantalana mandritra ny taona ianao. fa vanim-potoana ary ny vidiny dia tsy hitovy, ary ny tsiro ho hafa.
Any Thailand, antsoina hoe "Queen of Fruits," izay mamono ny fofon'ny "King of Fruits." Durian :). Ilay voankazo mihitsy dia toy ny baranjely boribory kely, fa samy hafa tanteraka amin'ny atiny sy ny tsirony. Ao anatiny dia misy silaka malefaka fotsy, ny fofona ivelany dia toy ny tongolo lay, ary raha tsy miovaova dia malefaka toy ny paiso paiso. Ireo silaka azo hanina amin'ny mangosteen sy ny tsirony tropikaly mamy sy mahavariana dia mahavariana ary tsy azo ampitahaina! Ny haben'ny voankazo masaka dia mitovy amin'ny paoma salantsalany.
Ny vidin'ny Mangosteen any Thailand isaky ny vanim-potoana dia miankina amin'ny habeny ary eo anelanelan'ny 25 ka hatramin'ny 35 baht isaky ny kg. Amin'ny vanim-potoana tsy ampoizina, mahatratra 100 baht isaky ny kilao ny vidiny.
Vanim-potoana tao Mangosteen any Thailand nanomboka ny martsa ka hatramin'ny novambra. Ny andro sisa, dia tsy fahita firy amin'ny talantalana izy ireo ary miakatra miaraka ny vidin'ny vidiny.
Ny mangosteen dia matetika no lanina vaovao, fa ampiasaina koa amin'ny fanaovana divay, amin'ny fanomanana tsindrin-tsakafo, ary ny vehivavy tsara tarehy dia manao saron-tava mahasoa avy aminy.
Tsikaritra ihany koa ny fomba hamoteran'ireo mponina kely fotsiny ny voankazo (ka vaky kely ilay peel), ary rehefa afaka izany dia raiso amin'ny tanana roa ilay mangosteen dia ahodiny amin'ny lalana samihafa (ny tanana iray amin'ny lafiny iray, ny iray kosa etsy andaniny), toy ny hoe manolana ny voankazo. Mandritra izany fotoana izany dia triatra ny peel ary mijanona tsy mitongilana ny atiny. Fomba mahomby (fanamarihan'ny mpanoratra).
Azonao atao ihany koa ny manao fihetsika tsy dia mahaliana kokoa, fa be kolontsaina kokoa. Hetezo ny hoditr'ahitra manaraka ny ekoatera amin'ny voankazo, ary am-pitoniana amin'ny tananao, toy ny sarony, saraho ny tapany amboniny. Mora miala ny atin'ny mangosteen masaka.
Mangosteen dia manana fananana mahery vaika mahery vaika.
Ny mpankafy an'io voankazo io dia tokony hihevitra fa any Thailand, ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia mitondra durian dia voarara! Ity voankazo ity koa voarara ho an'ny fitaterana amin'ny fiaramanidina!
Ny sandan'ny durian any Thailandy isaky ny vanim-potoana dia 80 ka hatramin'ny 100 baht isaky ny kg.
Vanim-potoana Durian maharitra mandritra ny fahavaratra, manomboka amin'ny tapaky ny volana Mey ka hatramin'ny tapaky ny volana aogositra.
Guava, Guayava (Ny anarany Thai no Farang)
Ny guava dia voankazo toa paoma maintso lehibe. (na dia misy karazany misy hoditra miloko voaroy, fa tsy ao Thailandy io). Amin'izao fotoana izao dia voankazo malaza be any Thailand izy io, na dia teraka any Amerika atsimo aza izy io. Aleon'izy ireo ampiasaina azy amin'ny antsasaky ny mason-koditra sy amin'ny hodiny, raha mbola mafy sy mamy mamy (mamy kokoa) ny pulp amin'ny tsiro. Rehefa masaka ny guava dia mihalefaka izy ary tsy miavaka intsony ny tsirony. Fotsy na mavokely ny nofon'ilay zakava. Ao anatiny, ny faritra midadasika iray dia tototry ny taolana tsy azo hanina (hatramin'ny zato ka hatramin'ny antsasaky ny arivo). Matetika no ampiasaina hanamboarana tsindrin-tsakafo ny zeziva.
Vidin'ny Guava any Thailand kisary 25 ka hatramin'ny 50 baht isaky ny kg. Ny vidiny dia miankina amin'ny habeny sy ivelany endrika "cosmetic".
Tsy manana vanim-potoana miavaka i Guava, satria mamoa isaky ny 4 volana.
mpamosavy ny kifafa (Som-o)
Voankazo voasary mahaliana. Malaza be any amin'ny firenena manerantany. dia maniry any Etazonia, India, Israel, saika ny firenena rehetra any Azia atsimo atsinanana sy any Sina. Saingy raha ny fanamarihana dia io no matsiro indrindra eto Thailand!
Ny vidin'ny Pomelo any Thailand hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 30 baht.
Vanim-potoana Pomelo ao Thailand ny volana aogositra ka hatramin'ny Novambra.
Pomelo dia contraindicated ihany koa raha ny nephritis, hépatitis, colitis ary cholecystitis
Papaya, ity dia voankazo mahafinaritra toy ny zucchini amin'ny endrika endrika, izay misy nofo mitovy amin'ny loko ny karaoty ary amin'ny firindrana sy ny firafitra mba hamelana :).
Ny vidin'ny Papaya any Thailand manao 40-50bat mandritra ny 1 kg.
Tany Papaya any Thailand manodidina ny taona. Malalaka izy, ary amin'ny ankapobeny dia matetika izy no hita fa mihalehibe eny an-dàlana izay alehanao. Fa ny lehibe indrindra dia manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny jona.
Nahazo ny anarany io ho fanomezam-boninahitra ny fitovizan'ny hodiny ivelany amin'ny mizana dragona. Toa mahatalanjona ity voankazo ity ... (sary hanaporofoana azy)
Mahagaga fa ny voan'ny dragona dia voan'ny ... cactus. :).
Amin'ny tsiro sy ny tsy fitoviana, ny voankazo dragona dia mitovy amin'ny betiravy nandrahoina sy kiwi amin'ny fotoana iray. Mamy malemy, tsy misy famirapiratana. Ny ranom-boankazo sy pulp an'ny pitahaya dia ampiana amin'ny firafitry ny vatomamy, gilasy, sorbets. Ny Jam, saosy, jellies, preserve dia vita amin'ny pulp. Any Thailand, ity voankazo ity dia matetika hita amin'ny zava-pisotro malefaka misy karazany maro.
Ny vidin'ny voan'ny dragona any Thailand Mirefy 50-70 baht isaky ny kg mandritra ny vanim-potoana tsy fahita firy ary 40 baht isaky ny vanim-potoana.
Vanim-potoan'ny Ranom-borona any Thailandy, Azonao atao ny milaza mandritra ny taona manontolo, fa ny be dia be amin'ny fahavaratra, manomboka amin'ny volana Jona ka hatramin'ny Aogositra.
Carambola (thai anarana ma-fuang)
Ny sandan'ny Carambola any Thailand eo amin'ny 30 baht.
Vanim-potoana Karambol ao Thailand dia mifanandrify amin'ny vanim-potoana betsaka indrindra amin'ny voankazo ary maharitra hatramin'ny Mey ka hatramin'ny Aogositra.
Any Thailand, ny paoma siramamy dia antsoina matetika hoe Noina, fa raha ny tena izy dia antsoina hoe Annona Scaly ity zavamaniry ity, ary Annona fotsiny ilay voankazo ". Ity dia voankazo tsy mahazatra iray, manjavozavo toa ny paoma, fa samy hafa tanteraka amin'ny tsiro sy ny firafiny. Ny mampiavaka azy koa dia ny tombony lehibe azo avy amin'ny fahasalamana sy ny tsiro tena mahaliana!
Ny pulpany marefo indrindra amin'ity voankazo ity dia tsy misy itovizany amin'ny tsiro…. Ho an'ny maro, dia mitovy amin'ny paiso na apricot, ary ho an'ny olona iray miaro azy, na paoma na paoma mamy nopetahana (naotin'ny mpanoratra). Na izany aza, tena mahasalama sy matsiro ity voankazo ity, ary very maina ny tsy firaharahan'ny mpizahatany azy io.
Vidin'ny Apple Sugar any Thailand amin'ny vanim-potoana dia eo anelanelan'ny 40 sy 50 baht isaky ny 1kg. Amin'ny vanim-potoana tsy dia fahita firy i Annona, ary tsy azonao antenaina ny mahita azy eny ambonin'ny talantalana, ary raha mahita ianao, dia amin'ny vidiny 70-80 baht isaky ny 1kg.
Annona Season any Thailandy maharitra hatramin'ny Novambra ka hatramin'ny Janoary.
Ny fomba voalohany, mazava ho azy, mora kokoa sy haingana kokoa, fa ny faharoa kosa dia mamela fahatsapana mahafinaritra kokoa amin'ny fizotrany (naoty nataon'ny mpanoratra).
Ity voankazo ity na miaraka amin'ny endrika iray na hafa atsetoginin, misy amin'ny endriny, dia natokana ho an'ny olona mandritra ny fitsaboana simika.
Ny hodi-kazo sy ny ravin'i Annona Scaly dia ampiasaina amin'ny fanomanana uzvars, ampiasaina amin'ny havizanana ara-batana sy ara-tsaina, ho an'ny fiakaran'ny tosidra, sery ary asma.
Ny vidin'ny paoma maintso any Thailand ambany sy antonony 20 baht isaky ny 1kg.
Vanim-potoana ho an'ny paoma mavokely any Thailand manodidina ny taona. Farafaharatsiny eo amin'ny talantalana sy ny fivarotana dia hita mandritra ny taona izany ary mitovy hatrany ny vidiny.
Voankazo na ranom-boankazo sy zava-pisotro avy amin'ireny dia ilaina amin'ny sery.
ny ampalibe (Nangka, Ka-antoandro)
Any Azia dia antsoina koa hoe ny voan'ny mofo, noho ny sandan'ny sakafo mahavelona azy, satria maniry any amin'ny toerana rehetra any amin'ny firenena atsimo atsinanan'i Azia izy. Mandritra izany fotoana izany, ny zava-drehetra dia ampiasaina amin'ny sôkôro, manomboka amin'ny ampahany azo hanina izay mamorona ny pulpany, hatrany amin'ny hoditra matevina izay mamahana ny akoho amam-borona. Ary amin'ny fandrahoana sakafo, ity voankazo goavambe ity dia manana fampiasana betsaka amin'ny salady, sy ny serealy ary amin'ny tsindrin-tsakafo. Ary any amin'ny magazay any Thailandy dia ahitanao gazy amam-boanjo ary na chips aza. Ireo fananana ireo dia namela ny nangka hahazoana laza malaza any amin'ireo firenena any Azia atsimo atsinanana.
Ny sandam-bary any Thailand is 25-40 baht. Na dia amin'ny faritra mandroso mpizahatany aza dia mety ho lafo kokoa.
Vanim-boasary any Thailand manodidina ny taona.
Ny votoatin'ireto podina ireto dia mahagaga fa mitovy amin'ny daty na amin'ny endrika na amin'ny tsiro. Tamarind dia antsoina hoe daty indiana amin'izany.
Ny vidin'ny Tamarind ao Thailand ao amin'ny vanimpotoana dia manodidina ny 80-100 baht isaky ny 1kg. Amin'ny vanim-potoana tsy hita, dia matetika no hita ao amin'ny talantalana fitehirizana, fa tsy vaovao sy somary lafo kokoa.
Fotoam-pahavalozana any Thailand nitsinkafona. Any amin'ny faritra atsimo dia manomboka amin'ny fiandohan'ny ririnina ary mifarana amin'ny faran'ny febroary, ary raha mandroso mianavaratra ianao dia mihamandroso ihany ny vanim-potoana roa ka hatramin'ny telo volana, ary any amin'ny faritra avaratra dia afaka manomboka amin'ny faran'ny faran'ny volana febroary ary hatramin'ny farany ny volana aprily.
Passion Fruit (gulupa)
Ny vidin'ny fitiavam-pitiavana any Thailand mihena ny vanim-potoana manodidina ny 45 baht. Amin'ny vanim-potoana fety, tsy fahita izany ary lafo kokoa.
Vanim-potoana ho an'ny voankazo maniry ao Thailand maharitra hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny aprily
Longan (Dragon Eye, Lam Yai)
Ny vidin'ny Longan any Thailand amin'ny vanim-potoana dia mihena hatramin'ny 20 baht +
Vanim-potoanan'i Longan any Thailand, dia malefaka ny fotoana satria noho ny zava-misy vanim-potoana any Thailand miovaova arakaraka ny faritra, ny longan amin'ny Thaialand dia hita eny amin'ny talantalana saika mandavantaona. Saingy, raha mandinika ny atsimon'i Thailandy isika, ny malaza indrindra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany, dia ny vanim-potoana lava nanomboka tamin'ny Jolay ka hatramin'ny Septambra.
Raha ny marina, ny longan dia matetika nohanina vaovao, fa tena afaka mankafy gourmets ho toy ny singa ho an'ny salady, gilasy ary tsindrin-tsakafo isan-karazany. Maina koa izy io ary ampiana zava-pisotro isan-karazany. Ilaina tokoa i Longan, noho izany, ho tombontsoanao manokana, aza esorina aminy ny fijeriny.
Ny pulp translucent an'ny langsat dia mamy sy manitra be. Mizara, toy ny tongolo lay, amin'ny ampahany 5-6, izay manandrana mamy-mamy-mangidy :), ary mampihetsi-po ny fiaraha-miasa amin'ny grapefruit, akondro ary voaloboka miaraka amin'izay. Fampifangaroana mahaliana? ... Marihina fa misy taolana mafy ao anaty pulp, izay tsy tokony hanandrana manaikitra ianao, satria mangidy loatra.
Ny sandan'ny lansat any Thailand amin'ny vanim-potoana dia eo anelanelan'ny 40 sy 60 baht isaky ny 1kg. Amin'ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana, dia hita eny amin'ny tsenan'i Thailand ihany koa izy io, saingy ho lafo kokoa ny vidiny.
Vanim-potoana amin'ny lansat sy longkong any Thailand ny volana jona ka hatramin'ny oktobra. Any amin'ny faritra sasany any Thailand, ary koa arakaraka ny filàn'ny hazo langsata, ny voa dia azo zanana indroa isan-taona. Noho izany, ny voany dia mety ho hita mandritra ny taona.
Raha amidy am-boninkazo ny langsat, dia alao antoka aloha fa tsy manidina ambanin'ny voankazo ao amin'ny rantsany ny vitsika, satria mankafy an'io voankazo io fa tsy ny Thais ihany. Ary ho mariky ny fankasitrahany, matetika izy ireo dia manangana ny zanatany eo amin'ireo rantsankazo nafenin'ny voan'ny langsat.
Sapodilla (lam), Lamut
Ny vidin'ny Sapodilla any Thailand isaky ny vanim-potoana dia 35 ka hatramin'ny 50 baht isaky ny 1 kg. Amin'ny vanimpotoana, raha hihaona aminy eny amin'ny counter ianao dia 50-70 baht isaky ny 1 kg ny vidiny.
Taonan'i Sapodilla any Thailand fihodinana mandritra ny taona, fa indrindra amin'ny fiatrehana, manomboka amin'ny volana septambra ka hatramin'ny desambra.
Notehirizina ny rakitra homemade amin'ny mari-pana ao anatin'ny efitrano hatramin'ny herinandro, ary ao anaty vata fampangatsiahana dia afaka mandry indroa mihoatra ny indroa.
Ny tsiro ny herring dia sarotra faritana, ary misy hevitra tena samy hafa izay ampitahaina amin'ny paoma, sy frezy, ary voankazo voasary. Izy io dia misy mamy sy mamy, koa ny safidy tsara indrindra (satria, amin'ny zavatra rehetra) dia ny manandrana azy ary, vokatr'izany, mamorona ny hevitrao manokana. :). Ny voankazo dia kely, azo ampitahaina amin'ny kiwi. Manify ny hodiny, ary eo ambaniny misy lobule roa na efatra misy taolana. Miovaova ny hakitr'izy ireo ary sarotra ihany koa ny mampiavaka azy. Mety ho crumbly sy crunchy, na mety ho be ranony toy ny paoma.
Inona koa no mampiavaka an'io voankazo io eo amin'ireo voankazo hafakely any Thailandy dia ny haniny. Sarotra ny mampifangaro azy amin'ny zavatra iray, satria manitra valerian na corvalol ny fofony ....
Ny vidin'ny voankazo bibilava any Thailand isan-taona dia 40 ka hatramin'ny 60 baht isaky ny 1 kg.
Fotoam-piadiana any Thailand ny volana May ka hatramin'ny Aogositra.
Fomba fikatsahana sy fihinanana voankazo bibilava
Ny hoditr'i Baltic dia manana hoditra matevina, ary raha malefaka ny tanana, dia azo atao tsara ny mikapoka azy ireo. Amin'ny tranga toy izany, raha manana voankazo bibilava maromaro ianao, dia ampy ny mifampitondra ao anaty kitapo ilay fiompiana, ary ho very tsilo haingana izy ireo.
Ny mahasoa ny voankazo bibilava
Ary koa, ny fiompiana dia manana fananana astringent tsara, izay midika fa tsara amin'ny famahana ny olana mifandraika amin'ny fivalanana.
Mandrava voankazo bibilava
RambutanNephelium lappaceum), amin'ny fiteny Thai - Ngo
Ny voankazo dia toa tsy latsa-danja lavitra noho ny anarany. Toa lavitra chestnut amin'ny hoditra izany. Manana tsilo malefaka mitovy amin'izany izy (lava kokoa - hatramin'ny roa santimetatra), ary ny haben'ny voankazo rambutan dia akaiky ihany koa amin'ny kastnut (3-6 cm).
Ny sandan'ny rambutan any Thailand isan-taona dia 25 ka hatramin'ny 45 baht isaky ny 1 kg.
Vanim-potoana Rambutan any Thailand ny volana May ka hatramin'ny Aogositra. Saingy afaka mifanena aminy amin'ny volana hafa ianao, amin'ny vidiny mora kokoa.
Mitahiry rambutan amin'ny mari-pana miampy 8 ka hatramin'ny 12C, avy eo ny voankazo dia tsy hahavery ny tsirony mandritra ny roa na telo herinandro. Mandritra izany fotoana izany, ny hamandoana avo no irina ho azy. Izany hoe, ao anaty vata fampangatsiahana, lavitra ny vata fampangatsiahana, dia mahazo aina izy.
Lychee (Linchi no anarany)
Cost Lychee ao Thailand ao amin'ny vanim-potoana 35-40bat mandritra ny 1 kg. Any amin'ny toerana tsy mpizaha tany izay maniry ny lychee dia mividy efa ho dimy kilao isaky ny vanim-potoana 20 baht.
Vanim-potoana Lychee ao Thailandy dia manomboka ny volana jona ka hatramin'ny oktobra, fa noho ny fanarenana tsara ny lychee dia azo jerena eo amin'ny talantalana izany mandritra ny taona.
Ny asidra folika misy ny voankazo dia ilaina rehefa manomana ny fitondrana vohoka ny ray aman-dreny roa tonta, ary efa mivantana rehefa mitondra olona salama ho avy. Ambonin'izany, ny losy dia ilaina ihany koa amin'ny lahatsoratra hafa ho an'ny vehivavy bevohoka, satria manampy amin'ny fitazonana endrika, manatsara ny feo ary mampiakatra fanahy! Ny zava-dehibe indrindra eto dia ny tsy fanararaotana azy io.
Vaovao fampiharana mahafinaritra avy amin'ny Windy.com, ny fiasan'izy ireo, azonao jerena amin'ny widgetn'ny toetr'andro amin'ity pejy ity, azo alaina avy amin'ny rohy - iOS и Android